Ukuqapha kwezinto eziphilayo kuyinkimbinkimbi yokubheka okulandela isimo semvelo, kanye nokuhlola nokubikezela kwayo kwezinguquko ezenzeka kuwo ngaphansi kwethonya lezinhlobo ezimbili ze-anthropogenic nezendalo. Njengomthetho, kunoma iyiphi insimu lezi zifundo ziqhutshwa njalo, kodwa izinsizakalo ezisebenzako ziyiminyango ehlukene, futhi izenzo zabo azihlanganiswa kunoma yiziphi izici. Ngenxa yalesi sizathu, ngaphambi kokuqapha imvelo, umsebenzi oqakathekileko ukukhipha isinqumo ngendawo yezemvelo nezomnotho. Isinyathelo esilandelayo ukukhetha ulwazi oluthinta ngokuqondile isimo semvelo. Futhi, udinga ukuqinisekisa ukuthi idatha engenayo yanele ukwenza iziphetho ezifanele.
Izinhlobo zokuqapha kwemvelo
Kusukela ngesikhathi sokuqaphela imisebenzi eminingi yamazinga ahlukene, ngesikhathi esisodwa kwaphakanyiswa ukuhlukanisa iziqondiso zayo ezintathu:
- ezemvelo nezomnotho;
Kodwa-ke, ngokujwayelekile kwenziwa ukuthi indlela enjalo ayivumeli ukucacisa ngokucacile imingcele yokuhlelwa kwemikhakha kanye nenhlangano. Akunakwenzeka ukuhlukanisa ngokunembile imisebenzi ye-subspecies yokuqapha imvelo.
Ukuqapha kwemvelo : ama-subsystems
I-subspecies eyinhloko yokubhekwa, eyenziwa yizemvelo, yilezi:
- Ukuqapha kwezulu. Le nsizakalo ibhekene nokuqapha nokubikezela ukushintsha kwesimo sezulu. Ihlanganisa isembozo seqhwa, umkhathi, ulwandle kanye nezinye izingxenye ze-biosphere ezithinta ukwakheka kwayo.
- Ukuqapha kwezemvelo. Le nsizakalo ihlaziya idatha ngokungcoliswa kwemvelo kanye nedatha kusuka kuma-hydrologists, izibalo zezulu.
- Ukuqapha kwezinto eziphilayo. Le nsizakalo ihlola ukuthi ukungcola kuyithinta kanjani zonke izinto eziphilayo.
- Ukuqapha impilo yezakhamuzi zensimu enikeziwe. Le nsizakalo ihlola, ihlaziya futhi ibikezela isimo sezempilo sabantu.
Ngakho, ngokujwayelekile, ukuqapha kwemvelo kulandelayo. Imvelo (noma enye yezinto zayo) ikhethiwe, imingcele yayo iyalinganiswa, iqoqwe, bese ulwazi ludluliselwa. Ngemuva kwalokho, idatha isetshenzwa, izici zabo ezijwayelekile zinikezwa esigabeni samanje futhi ukubikezelwa kwenziwa ngekusasa.
Izinga lokuqapha isimo semvelo
Ukuqapha kwemvelo kuyisistimu yezinga eliphezulu. Ukukhuphuka kubonakala kanje:
- Izinga eliningiliziwe. Ukuqapha kwenziwa ezindaweni ezincane.
- Izinga lendawo. Lolu hlelo lwakhiwa lapho izingxenye zokuqapha okuningiliziwe zihlanganiswa zibe inethiwekhi eyodwa. Okusho ukuthi sekuvele endaweni yesifunda noma idolobha elikhulu.
- Izinga lesifunda. Ihlanganisa insimu yezifunda eziningana ngaphakathi kwesifunda esisodwa noma esifundazweni.
- Izinga likazwelonke. Yakhiwa uhlelo lokuqapha kwesifunda oluhlangene ezweni elilodwa.
- Izinga lomhlaba wonke. Ihlanganisa izinhlelo zokuqapha kwezizwe eziningana. Umsebenti wayo ukuqapha isimo semvelo emhlabeni wonke, ukubikezela izinguquko zayo, kubandakanya, futhi ngenxa yomthelela we- anthropogenic factor kwi-biosphere.
Ukuqapha kwemvelo kuyisayensi ngokweqile futhi kunehlelo layo. Icacisa izinhloso zokuqaliswa kwayo, izinyathelo ezithile kanye nezindlela zokusebenzisa. Amaphuzu aphambili ohlelweni lokuqapha imvelo kanje:
- Uhlu lwezinto ezibhekwayo. Inkomba ecacile yensimu yabo.
- Uhlu lwezinkomba zokuqapha okuqhubekayo kanye nemingcele evumelekile yokushintsha kwawo.
Futhi, ekugcineni, isikhathi esithile, okungukuthi, yiziphi izibonelo zesampula okufanele zisampuliwe, nalapho idatha kufanele inikezwe.